Raw Tianeptine hemisulfate monohydrate powder (1224690-84-9) Tsanangudzo
Product Name Raw Tianeptine hemisulfate monohydrate powder
Kemikari Name Tianeptine hemisulfate monohydrate; 1224690-84-9; Heptanoic acid,
muchiso Name Stablon, Coaxil
Kirasi yeMishonga Intermediates & Fine Chemicals
Molecular Wsere 1008.004 g / mol
Kunyorera Point 1800 ° C
Kubikira Point 269.8 ° C pa 760 mmHg
ruvara off-White Powder
Skukodzera Yakanyatsogadzikana Mumvura uye methanol uye dichloromethane
Storage Temperature Cool yakaoma nzvimbo
APane Tianeptine sodium inogona kushandiswa muTricyclic pamwe ne psychostimulant
Tianeptine sodium ine basa rekurwisa-ulcer uye anti-emeemiti. Antidepressant
Raw Tianeptine hemisulfate monohydrate powder, iyo inonziwoTianeptine Sulfate, inoshandiswa shanduko yemu tianeptine sodium salt form. Icho chisina kuchena, chiri nyore kubata, chinoderera pasi nyore, uye chinogara kaviri kana kwenguva refu. Iine zvose zvakafanana zvakafanana neTianeptine Sodium, chete fomu sulfate ine hafu yehupenyu hwema 5-6 maawa, saka inogara kaviri kana yakareba se tianeptine sodium. Nokuda kweizvi, vatsvakurudzi vachada 2-3 nguva nguva ye sulfate kuti vawane zvido zvavanoda izvo vauya kubva pane sodium. Sulfate isingasvikiwo mune zvose zvinonaka uye maziso.
Tianeptine hemisulfate monohydrate inorondedzerwa senototonin reuptake enhancer (SSRE) inoshandiswa kurapa kuora mwoyo. Tianeptine yakagadzirwa muFrance muma 1960 uye yakashandiswa kumativi ose ekupedzisira e2000s.
Iyo dzimwe nguva inoshandiswa kugadzirisa chirwere chinokanganisa maronda kana chirwere chemafi. Pamusoro pemitambo yakakura inonzi yakabudisa maopioid-seanozorodza zvinokonzera sedation uye kukurudzira, kukurudzirwa kukurudzira, uye kufara apo inoshandiswa.
Tianeptine hemisulfate monohydrate (THM) powder (1224690-84-9) Mechanism of Action
Imwe yepamusoro miitiro yekuita kweTianeptine hemisulfate monohydrate ndeyokuwedzera serotonin (5-HT) inowanikwa muuropi uye mumaplatelets. Kusiyana nematricyclic akawanda, Tianeptine haina kuonekwa seinobatanidzwa nekuderera mukugogodza kushanda kana motokari. Zvinoratidzika kuva nemabasa pane glutamatergic system, iyo inofungidzirwa kuva inoverengeka inopesana nezvinetso.
Nokuwedzera serotonin kuwedzera, Tianeptine hemisulfate monohydrate ine nzira inopesana nemasikirwo eSRRIs. Ongororo dzechangobva kuongorora dzakaongorora migumisiro yeTianeptine mukati mehutano hwehutachiona hwehutachiona hwekuora mwoyo, umo hungave huine zvimwe zvekuita. Ongororo yapfupi inoratidzawo kuti Tianeptine inogona kuwirirana neadenosine A1 receptors.
Uyezve, kutsvakurudza kwakapfupiswa kwakabudiswa muna 2014 kunoratidza kuti Tianeptine inogona kuita se m-opioid receptor (MOR) agonist. Vatsvakurudzi vakashandisa radioligand kusunga uye masero-based based assays kuti azive Tianeptine semagetsi anoshanda MOR agonist. Ichowo chizere che d-opioid agonist asi pahukama hwakaderera. Tianeptine yakanga isingabatsiri panzvimbo dze k-opioid receptor.
shandisa ye Tianeptine hemisulfate monohydrate (THM) powder (1224690-84-9)
▪ Kuora mwoyo kunetseka
▪ Kurwisa kuzvidya mwoyo uye kuora mwoyo uye unhu hunotyisa
▪ Kuziva kushanda uye kugadzirisa unyanzvi hwokudzidza
▪ kurwadziwa kwepfungwa
Yakakurudzirwa Tianeptine hemisulfate monohydrate (THM) powder (1224690-84-9) Dosage
Tianeptine hemisulfate monohydrate dosage inowanzoitwa 25 mg kamwe, kana kaviri pazuva. Kunyangwe kana uchitanga nehotera shoma, zvakanakisisa kuideredza ku 2 kana kuti 3 mazuva pavhiki pamwe ne3 - 4 mazuva ari pakati.
Tianeptine hemisulfate monohydrate inouya mune capsule kana powder form. Inokurudzirwa kutanga nemutengo wepasi uye kuwedzera nemari shomanana kusvikira kuyerwa kwakakwana kuchiwanikwa. Uyezve, maduku maduku anoderedza zvingaita zvekudhakwa, kubvisa zvakanyanya, uye kushivirira.
Maitiro e50 - 75 mg anogona kukurudzira. A Tianeptine hemisulfate monohydrate chirwere chekuvaraidza> 100 mg inogona kukonzera Tianeptine hemisulfate monohydrate high sensation.
Kubatsira kweTianeptine hemisulfate monohydrate (THM) powder (1224690-84-9)
♦ Tianeptine hemisulfate monohydrate inovandudza ubongo neuroplasticity uye inoderedza kuora mwoyo. Neuroplasticity inokwanisa kukwanisa kuchinja nekushandura paunenge uchidzidza; zvichiita kuti pave nekunzwisisa kugadzirisa kushanda nekuvandudza ruzivo rwekudzidza.
• Kuongorora varwere ve90 vane PTSD vakaratidza zvibereko zvakanaka nekushandiswa kweTianeptine hemisulfate monohydrate. Zvidzidzo zvakare zvakaratidza kuti nekurapa ne tianeptine sulfate uye zvakanyanya kuderedzwa mukutyisa chirwere. Tianeptine hemisulfate monohydrate yakapiwa kuvarwere vakwegura yakaratidza kuvandudza kushungurudzika neurocognitive basa uye mafungiro ekuvandudza.
• Zvidzidzo zvemhuka uye zvevanhu zvakaitwa mukurapa chirwere chePasinson ne Tianeptine hemisulfate monohydrate, ichiratidzira migumisiro yakavimbisa mukuvandudza hutano hwepfungwa.
♦ Kutanga kuongorora nezvevarwere veA68 neADHD vakagumisa kuti zvinorehwa zviitiko zvakagadziriswa zvakanyanya uye kuti Tianeptine hemisulfate monohydrate inobatsira mukugonesa kukwanisa kuchenjerera uye kupera tsika dzisina kunaka.
♦ Tianeptine hemisulfate monohydrate inoshandawo zvakafanana (painkiller), kunyange kune vamwe vanotambura nekurwadziwa kusingaperi. Iyo inzira inobatsira yekudzivirira zviratidzo zvine chokuita nemukati yehutano nyaya pamwe chete.
♦ Institute of Experimental Medicine muCaracas yakaita chirongwa che52-week randomised of children with asthma. Varwere vanotungamirirwa Tianeptine hemisulfate monohydrate vakaratidza kuwedzera kukuru mumapapu.
• Kunyange zvazvo kutsvakurudza kwakawanda kuchidiwa, chidzidzo chevarume ve237 neDD chakasarudza kuti tianeptine inogona kuva youtano hwakanaka.
♦ Tianeptine's anxiolytic effects haigadziri zvakakonzera acetylcholine kana kuti mwoyo yemwoyo, zvichiita tianeptine chisarudzo chakanaka kune vakwegura pamwe nevamwe